Khilaafka u dhaxeeya Itoobiya iyo Masar oo ka dhashay biyo xireenka oo Somalia ka noqotay… – Hagaag.com
Khilaafka u dhaxeeya Itoobiya iyo Masar oo ka dhashay biyo xireenka oo Somalia ka noqotay…
Posted on 23 Maarso 2020 by Admin in National // 0 Comments
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Xukuumadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa markii ugu horeesay ka hadley khilaafka ka dhashay biyo xireenka ay dowlada Itoobiya dhiseyso ee khilaafka ka dhax abuuray Dowladaha Itoobiya iyo Masar.
Waxaa uu sheegay wasiir Cawad in Soomaaliya ay dhex dhexaad ka tahay khilaafka u dhaxeeya labada dowladood ee Masar iyo Itoobiya, waxa uuna meesha ka saaray in Soomaaliya ay labada dhinac mid la safan tahay.
“Runtii mowqifka Soomaaliya ee khilaafka dowladaha Itoobiya iyo Masar waa dhex dhexaadnimo, xaqiiqdii fursada kaliya ee inoo furan waxaa waaye inaan isku soo dhaweyno ama aan ka aamusno balse marnaba Soomaaliya looma yeerin doono go’aankeeda ayuu yiri” Wasiir Cawad.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaa waxbo kama jiraan ku tilmaamay in Soomaaliya ay saxiixday taageero Wadamada Carabta u muujiyeen dowlada Masar, waxa uuna cadeeyay in Soomaaliya ay arintaasi dhax dhaxaad ka tahay.
Dowlada Soomaaliya oo xiriir dhaw la leh dowladaha Itoobiya iyo Masar ayey ku adkaatay in dhinac la safato, waxaana Madaxda Soomaaliya go’aansadeen in khilaafkan dhax dhaxaad ka noqdaan si aysan saameyn xun ugu yeelan.